dimanche, 08 janvier 2017 16:27
Jiolahy mitam-basy : Voasambotra i Sylvain sy Sampy
Malaza ratsy amin’ny fanafihana mitam-basy teto Toamasina izy ireo, ary mitondra moto “scooter” rehefa manao ny asa ratsiny. Maromaro ireo tranombarotra sy mpamongady efa norobain’izy ireo.
Telo lahy nenjehin’ny Polisy tao amin'ny Dépôt Analakininina ka i Sylvain sy Sampy no voasambotra fa tafaporitsaka niaraka tamin’ny basy poleta fitondran’izy ireo manafika ny iray namany.
Ao anatin’ny fanadihadiana azy roa lahy ny Polisy amin’izao, ka ny alatsinainy 9 janoary izy ireo no hatolotra ny Fitsarana.
dimanche, 08 janvier 2017 16:25
Fiaraha-miasa : Sambo roa sy vola iray miliara Ariary avy amin’ny Sinoa
Nanome vola iray miliara Ariary hanatsarana ny biraon’ny ministeran’ny raharaham-bahiny malagasy sy sambo roa hanaraha-maso ny morontsiraka Malagasy ny Sinoa.
dimanche, 08 janvier 2017 16:19
Andapa : Nirehitra ny birao fiasan’ny Jirama
Nanomboka tamin’ny misandratr’andro (10ora 50 minitra) teo ny afo. Ny Zandary eo ampita no nampandre ny fisian’ny afo nivoaka avy amin’ny birao.
Ora iray aty aoriana, tsy mbola maty ny afo. Tsy manana irony fiara mpamono afo irony rahateo ny tanàna, ka manano sarotra ny fifehezana ny afo. Ny nanavotra ireo trano manodidina ihany koa no nifandrombahan’ny olona.
Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny niandohan’ny afo. Mbola tao anaty delestazy rahateo no nampirehitra azy. Mandeha ny fanadihadiana. Tsy voakasik’ity fahamaizana ity ny foibe famokarana herinaratra. Somary misintaka ny tanàna rahateo no misy azy.
dimanche, 08 janvier 2017 16:11
Antanambao SOTEMA – Mahajanga : Hivaha amin'izay ny olan’ny herinaratra
Hivaha tsy ho ela ny olana amin'ny jiron’ireo mponina eny Antanambao Sotema-Mahajanga izay miaina amin'ny fanaovana “branchement parasite”.
Tonga teny an-toerana ny depiote Rahantanirina Lalao na Ninà, voafidy teto Mahajanga-I, ny zoma teo nanolotra ny taratasy fifanarahana efa vita sonia miaraka amin'ny JIRAMA, izay hanao ny asa, sy ny prefektiora.
Vola mitentina 51 tapitrisa Ariary no hanatanterahana ity famatsian-jiro ity ary andrin-jiro miisa 16 no hanaovana izany.
Efa an-taonany maro no niainan'ireo mponina ny fangalarana jiro toy izao ary notapahan'ny Jirama izany nandritra ny fety teo ka niaina tanteraka tanaty haizin-kitroka ny mponina.
dimanche, 08 janvier 2017 16:09
Bekily Androy : Ravan'ny orana ny tranon'ny Zandary
Nikija ny orana taty Bekily Androy tato anatin’ny telo andro nisesy izay. Vokatr’izany dia rava ny tranon'ny Zandary, indrindra ny ipetrahan’ireo Zandary vehivavy.
Sahirana ny eto an-toerana na ny hasiana ireo Zandary traboina aza.
dimanche, 08 janvier 2017 12:15
Andapa : Mirehitra ny Jirama
May amin'izao ny biraon'ny Jirama eto Andapa.
Mbola tsy fantatra ny nipoiran'ny loza.